बेलायतको केन्टमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा भयानक आगलागी
लण्डन । बेलायतस्थित केन्टमा रहेको एक औद्योगिक भवनमा भयानक आगलागी भएको छ । उक्त क्षेत्रमा उडेको धुँवाको मुस्लो कोशौँ परबाट पनि देखिइरहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बेलायतमा एकाएक आकाशियो घरको मुल्य
लण्डन । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउन हटेसँगै बेलायतमा घरको मूल्य व्यापक वृद्धि भएको छ । रिपोर्टका अनुसार बेलायतमा १६ वर्षकै उच्च विन्दुमा उक्लिएको छ । बेलायतमा लगातार घरको मुल्य बढेको हो ।
बेलायतमा हामीलाई निजी क्षेत्रबाट धेरै सहयोग भएको छः डा. काफ्ले
लकडाउन तथा कडा नियमसँगै उपचारको कारण क्रमशः संक्रमितहरुको संख्या घट्दै गइरहेको भए पनि पछिल्लो समय बेलायत सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने कोशिस गरिरहँदा कोरोना भाइरसको अर्को लहर आउने सम्भावना भएको विज्ञहरुको चेतावनी छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनबारे बेलायतमा रहेका नेपाली समुदाय के भन्छन् ?
लण्डन । एक वर्ष अगाडि बोरिस जोनसन बेलायतको प्रधानमन्त्री बने । पुर्व प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँग बेलायतबासीहरुले ठुलै अपेक्षा गरेका थिए । तर, उनले ब्रेक्जिट गराउन नसक्दा पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरिन् । उनले गरेको प्रस्ताव बारम्बार अस्वीरका भएसँगै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकप्प भएन ।
चीनले बेलायतलाई दियो चेतावनी
लण्डन । पछिल्लो समय चीन र बेलायतको सम्बन्धमा पनि दरारहरु उत्पन्न भएका छन् । बेलायतले हङकङप्रति देखाएको चासोले चीन रुष्ट रहेको छ । चीनले बेलायतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खाजेको आरोप लगाएको छ ।
बेलायतमा कोरोना भाइरसको सन्त्रास कम हुँदै जाँदा सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गइरहेको छ । विद्यालयका केही कक्षा, पसलहरु खुल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा के के कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर हाल बोर्नमाउथ विश्वविद्यालयमा आवद्ध जनस्वास्थ्यविद् डा. निर्मल अर्यालसित गरिएको कुराकानीः
एजेन्सी । बेलायतमा जुन १ देखि विद्यालय सञ्चालन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले अब लकडाउन खुकुलो पार्दै जुन १ देखि विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।